Musiibadii dabka ee Suuqa Boosaaso iyo Sida loogu Gurmaday – SBC
Musiibadii dabka ee Suuqa Boosaaso iyo Sida loogu Gurmaday
Abaarihii saacadu markay ahayd sagaalkii fiidnimo ee xalay ayaa waxaa uu dab qabsaday suuqa weyn ee daarulsalaam magaalada boosaaso kaasoo ah xudunta dhaqaalaha iyo ganacsiga puntland dabkaas oo ku fiday dhamaan inta badan suuqaas.
Dabkan oo ahaa mid ku bilowday xowli ayaa hal mar is qabsaday kaasoo si xowli ah ugu fidiyay dhamaan goobihii ganacsiga markaasoo uu ka bilowday inta u dhaxaysa sarifka iyo halka loo yaqaan Toox oo ah goobaha lagu iibiyo raashinka bagaashka iyo waliba dhanka caanaha iyo dhuxusha musiibadan dabka oo xalay hal mar dadku ay ku baraarugeen ayaa waxa ay u shaqaaqeen badbaadinta goobaha kale ee ka agdhow.
musiibadii dabkan qabsaday suuqa ganacsiga boosaaso ayaa ahayn mid laga sheekeyn karo balse dadkii ka qayb qaadanayay damintiisa ayaa warbaahinta SBC u sheegay in aan la aqoon sababaha keenay dabkaasi baaxada lahaa.
Markii ay socotay daminta dabka aan guusha laga gaarin ayaa la arki karay dad wata sakeelooyin jiirigaamo iyo waliba jawaano ay ku jiraan caro markaasi lagu daminayay dadkaasoo isugu jiray kuwo lahaa meheradaha gubanayay eheladooda asxaabtooda iyo kuwa inta badan u badnaa dad alle xagiis kaga qayb qaadanayay waxaa kaloo xusid Mudnaa ka qayb qaadashada maamulka oo lagu arkayay goobahaas ciidamo farabadan oo amaanka sugayay iyo waliba gaadiidka dabdamiska oo qayb ka ahaa.
Warbaahinta SBC ayaa waxaa ay sidoo kale ka mid ahayd gurmadka iyo wacyigalinta musiibadaas iyagoo tiro wariyaal ay ku sugnaayeen wadooyinka iyo goobahii dabka uu qabsaday saxafiyiintaas oo gudbinayay hadba halka uu marayo samatabixinta goobaha markaas laga badbaadin karo.
Musiibada dabkaasi ayaa ilaa iyo maanta laga dareemayay qaybo ka mid ah suuqa walow barqadii maanta uu soo afjarmay dabkaas kaasi oo lagu qiyaasi karo in uu inta badan baabi,iyay hantidii tiilay suuqaas kuwaasoo isugu jiray ganacsato iyo kuwa noloshooda ku maareyn jiray waxaa sidoo kale dadku isasaarayeen eeda dabka gaar ahaan dadka boosaao oo ay sheegeen in shacabka boosaaso xireen wadooyinka laga galo suuqaas oo markaasi jaantaa rogan ku dhisteen suuqa.
Sidoo kale waxaa tacsi iyo samir siin xaga eebe diraya inta badan isimada nabadoonada waxgaradka iyo aqoonyahada kuwaasoo u diraya dhamaan dadkii ku hanti beelay dabkaas iyo kuwii kale ay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ka soo gaartay.
aad ayaan uga xumahay dhibka uu geystey dabkani dadkii ku cayrobeyna ilahay cawil khayr qaba hasiiyo iimankana ha uga reebo amin
aad ayaan uga xumahay inaan arko suqaan caruurnimadii ilaa aaan nin ka garo in wax gaaraan insha alaah wax ka khayr qabaan rajayn badilaad